Weeraro Khasaare Geestay Oo Ka Kala Dhacay Gobollada Dalka Soomaaliya – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Weeraro Khasaare Geestay Oo Ka Kala Dhacay Gobollada Dalka Soomaaliya
Last updated Jul 18, 2021 226 0
Gobalka Jubbada hoose ee dhaca koonfurta dalka Soomaaliya ayaa shalay iyo xalay waxay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen howlgallo khasaare lagu gaarsiiyay askar ka tirsan ciidanka DF.
Deegaanka Buulo Guduud ee duleedka magaalada Kismaayo ayay ciidamada Mujaahidiinta waxay shalay weerar dhabagal ah kula beegsadeen askar ka tirsan ciidanka Danab oo uu Mareykanka sootaba baray, waxaana ku dhaawacmay 4 askari oo ka tirsan ciidankii ku dhacay kamiinka loo dhigay.
Isla Jubbooyinka waxay Mujaahidiinta xalay weerar toos ah ku qaadeen fariisan ay deegaanka Kulbiyoow ku leeyihiin ciidamada Kenya ee dulaanka ku jooga qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya.
Gobalka Banaadir Rag hubeysan oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay xalay degmada Hiliwaa ku toogteen Maxamed C/Raxmaan Yuusuf oo ahaa Guddoomiye Laameed ka tirsan degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Dhanka gobalka Bakool waxay xalay dagaalyahanada Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada DF ee degmada Xudur, kaas oo khasaare lagu gaarsiiyay askartii ku sugneyd saldhigga.
Sidoo kale Mujaahidiinta ayaa Xalay howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen magaalada Baladweyne ee gobalka Hiiraan waxay ku dileen askari ka tirsan DF, iyagoona ka furtay qorigii uu ku hubeysnaa.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay si joogta ah weeraro kaga fuliyaan degmooyinka iyo deegaanna ay ciidamada shisheeye iyo kuwa maamullada ka amar qaata kaga sugan yihiin dalka Soomaaliya, kuwaas oo lagu gaarsiiyo khasaare nafeed.